Church ye Anglican ye CPCA Inokwidza Nyaya kuDare Re Constitutional Court
Nyamavhuvhu 26, 2011
Svondo rapera, mukuru wevatongi vematare, Va Godfrey Chidyausiku, vakapa VaKunonga mvumo yekuva nemasimba pazvivakwa zvechechi izvo zvisina kufadza ve CPCA vava kuda kuti dare re Supreme Court, ritore nyaya iyi seyekutyorwa kwekodzero dzevatsigiri vechechi iyi
Sangano re Anglican Diocese muHarare re Church of Province of Central Africa kana kuti CPCA, iyo iri kunetsana nevaimbova Bishop we Harare, Va Nolbert Kunonga, pamusoro pezvivakwa zvechechi izvo Va Kunonga vari kuti ndezvavo, yakwidza nyaya yezvivakwa izvi kudare repamusoro soro reSupreme Court.
Svondo rapera, mukuru wevatongi vematare, Va Godfrey Chidyausiku, vakapa VaKunonga mvumo yekuva nemasimba pazvivakwa zvechechi izvo zvisina kufadza ve CPCA vava kuda kuti dare re Supreme Court, ritore nyaya iyi seyekutyorwa kwekodzero dzevatsigiri vechechi iyi.
Zvichakadaro ve CPCA vari kuti vanhu vaVa Kunonga vari kufamba vachirova nekumbunyikidza vanhu vachiri kugara mudzimba dze chechi idzo va kunonga vari kuda kutora vachishandisa mutongo waVaChidyausiku.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaKunonga. Asi zvinonzi Va Kunonga nedivi ravo havasati vapindura kune zvakakwidzwa kudare nedivi raVa Chad Gandiya re CPCA.
Vane mazuva gumi ekuti vapindure. Va Mike Chingore ndivo mutauriri we CPCA. Vanoti vane chivimbo chekuti dare rose re Supreme Court richaita mawonere mwamwe navo.